डा. गाेपाल ठाकुर सोमबार, फागुन १२, २०७६ मा प्रकाशित
हाम्रो प्रधानमन्त्री नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको ६९औं जन्मोत्सव भव्यताका साथ मनाइएको छ । हजारौंको संख्यामा विद्यार्थीहरूलाई कॉपी-कलम, गरीबगुरुवाहरूलाई वस्त्र वितरण गरियो भने अघाउँदो भोजभतेर चलाइयो । महिनौंदेखिको तयारी पनि चलेको थियो । हेलिकॉप्टरहरू चार्टर गरिए । यही साइत जुराएर कयौं परियोजनाहरूको शिलान्यास-उद्घाटन पनि भयो । स्वाभाविक छ, राजा-रजौटाहरूले मात्रै जन्मोत्सव कति मनाउने ? त्यसमा पनि अब राजा-रजौटा त देशमै रहेनन् । त्यसैले जनताका सन्तानहरूले पनि जन्मोत्सव मनाउन पाउनु पर्छ, राम्रैसँग पाउनु पर्छ । यो अलग कुरो हो, कम्युनिष्ट आदर्शभित्र चाडपर्व र उत्सवहरू कसरी मनाउनु पर्छ, हालसालै जारी पार्टीपरिपत्रमा सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिलाई मितव्ययी हुन निर्देशित गरेको छ । तर सो आचार-संहिता पार्टी अध्यक्षमा लागू हुन्छ कि हुँदैन ? प्रश्न उठाउन पनि मिल्ने हो कि कुन्नि !
निश्चय पनि हाम्रो देश नेपालको संविधान अनुसार धर्मनिरपेक्ष छ । तर संविधानको धारा ४ मा धर्मनिरपेक्षताको स्पष्टीकरणले यसो भनेको छः यस धाराको प्रयोजनको लागि “धर्मनिरपेक्ष” भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनु पर्छ । त्यसैले केक काटेर देशका प्रधानमन्त्रीले जन्मोत्सव मनाइरहँदा सनातनदेखि चलिआएको कुन धर्म संस्कृतिको संरक्षण भएको हो, बुझ्न नसकिने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रवादको पर्यायवाची व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । हुन त राष्ट्रवादमा मेरो सहमती छैन । किनभने यो एक जाति, एक भाषा, एकल पहिचान, एक धर्मको पर्यायको रूपमा पश्चिममा उदाएको अवधारणा हो । यसलाई भूलवश देशभक्तिको पर्याय बनाइएको छ । तर यस पालिको जन्मोत्सव मनाइरहँदा कॉमरेड ओलीले आफ्नै राष्ट्रवादलाई पनि धुज्जाधुज्जा पार्नु भएको छ । सर्वविदित छ पहिचान बोकेको संघीयताले देश विखण्डन हुन्छ भन्दै उहाँ लगायतका राष्ट्रवादीहरूले गर्दा चौध अंचल र पाँच विकास क्षेत्रलाई सात प्रदेशको जामा पहिर्‍याई भौगोलिक संघीयता बहाल गरिएको हो । तर आफ्नै जन्मोत्सव मनाइरहँदा देशको नक्शाकारमा केक तयार गरी टुक्रा-टुक्रा पारी आफैँले बाँडेको कुन संस्कृति र कुन संस्कार हो, बुझ्न सकिएको छैन । अन्य कसैले गरेको भए सहजै देशद्रोहको मुद्दा चल्थ्यो ।
अर्का अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि हिजै आफ्नो परलोक सुधार्ने काम गर्नु भएको छ । भगवानको डोला आफ्नै काँधमा उठाएर मिथिला परिक्रमाको उद्घाटन गर्नु भएको छ । डोला त्यस सामन्ती समाजको अविष्कार हो जुन बेला गोरुगाडा पनि बनेको थिएन । ठूल्ठूला सामन्तहरू डोलेहरूको प्रयोग गरी डोलामा यात्रा गर्दथे । त्यसको निरन्तरता विवाहसम्म सीमित थियो । खास गरी बेहुलीलाई डोलीमा भित्र्याइन्थ्यो । जनयुद्धले त्यस निरन्तरतालाई पनि समाप्त गर्‍यो । कयौं ठाउँमा डोला चढेर बिहे गर्न गइरहेका बेहुलाहरूले पनि कारवाई भोगे । जनयुद्ध र जन आन्दोलनले विष्णुको अवतार भनेर सम्पूर्ण नेपालका जनतालाई कज्याउँदै आउने राजा सहित राजतन्त्रलाई उन्मूलन गरे । तर विष्णुको अवतारलाई उन्मूलन गर्न फरमान जारी गर्ने सर्वोच्च कमाण्डर प्रचण्ड परमाधिपति विष्णुको डोले बनेको देख्दा उहाँको आदेशमा डोलामा बसेवापत सजायँ पाउने बेहुलाहरूले के भनेका होलान् । हुन त नारायण पोखरेललाई प्राण दण्ड दिने सैन्यदस्ताका सर्वोच्च कमाण्डरले यस अघि नै दीनबन्धु पोखरेलको आध्यात्मिक ज्ञान महायज्ञको उद्घाटन गरिसक्‍नु भएको छ ।
अध्यक्षद्वयको यो सर्वोत्कृष्ट दृष्टान्तले पुष्टि गरिसकेको छ, धर्मनिरपेक्ष देशकी राष्ट्रपतिले मधानी महोत्सवको नाममा आयोजित शिवपार्वती विवाहोत्सव लघुरुद्री यज्ञको उद्घाटन गर्नु शतप्रतिशत जायज हो । तसर्थ कॉमरेड प्रचण्डले छोरो प्रकाशको काजकिरिया नगर्नु अथवा कॉमरेड प्रभुले आमाको काजकिरिया नगर्नुको राम्रै प्रायश्चित गर्नु भएको छ । हुन त देशमै सर्वाधिक दार्शनिक चेतना फैलाउने काम गरेका साम्यवादी चिन्तक मोदनाथ प्रश्रितको हिन्दू मनिषीमा पहिले नै पतन भइसकेको छ । उहाँले केही वर्ष अघि नै पूरै विधिविधानको साथ श्राद्धकर्म गरी आफ्नो आमालाई स्वर्गवास गराइसक्‍नु भएको छ । उहाँको देवासुर संग्राम पढेर हजारौंको संख्यामा नेपालको जनता कम्युनिष्ट बने । तर आफैं फोहोरको खाडलमा खस्‍नु भयो ।
तर माथिको यति सानो फेहरिश्तले केही कुरो अवश्य संकेत गर्दछ । भोजपुरीमा प्रचलित यो उखान यहाँ राम्ररी चरितार्थ भएको छः जौले निर्धन तौले सधुआई । धन होई त सधुओ बउराई ।। अर्थात वर्ग परिवर्तनले मात लाग्दो रहेछ । निश्चय पनि हाम्रा यी धरोहरद्वयका यी सत्कर्महरूले देशभक्ति र साम्यवादमाथि राम्ररी चुनौती तेर्स्याएका छन् । तर यस्ता चुनौतीहरूको सामना कुनै न कुनै रूपमा नेपालका जनताले गर्नेछन् भन्ने विश्वास कतै डगमगाएको हो कि, भनी अर्थ लाउन सकिँदैन ।
चन्द्रागिरि-७, काठमाडौँ ।